AnimeLog dia TSY Fahafatesan'ny Crunchyroll na fialamboly - Hafa
AnimeLog dia TSY Fahafatesan'ny Crunchyroll na fialamboly, tsy inona izany fa Clickbait
AnimeLog no 'soloina' an'ny KissAnime taorian'ny fahafatesany vao tsy ela akory izay. Na farafaharatsiny izay no iantsoan'ny olona sasany azy.
Ary tsy nahagaga - ny clickbait YouTubers sy ny mpanonta dia nilaza fa 'ny fahafatesan'ny Crunchyroll sy Funimation'.
Tsy mahazo clickbait intsony io , tsy lazaina intsony ny mampihomehy sy ny fifandraisana.
Ny mpankafy anime sasany dia toa miombon-kevitra amin'izany nefa amin'ny ambaratonga tsy dia mihoampampana.
Nah f * ck it, manitatra be loatra izy ireo….
Vaovao tsara daholo! Tsy ho ela dia hanomboka afaka amin'ny anime i Anime ao amin'ny fantsona Animelog avy eo, ka tsy handoa vola intsony crunchyroll hijerena pic.twitter.com/r8neDoP46m
- & # x1f351; (@RealDevuil) 19 Aogositra 2020
Mampihomehy ireo mpihazakazaka mpihinana Animelog. Notohizan'izy ireo ny fiafaran'ny Funimation sy Crunchyroll, raha toa ka ny anime dia toa anime Doraemon sy Tezuka. Ireo anime ireo no jamako, saingy mazava ho azy fa tsy azy ireo.
- massoluk - Zava-miaina mainty. (@massoluk) 17 aogositra 2020
Faly aho fa ny Crunchyroll sy Funimation dia hajanona amin'ny orinasa noho ny AnimeLog. https://t.co/h2eewR0NCM
- Zaelkrie & # x1f1ff; & # x1f1e6; (@nandoh) 17 aogositra 2020
Mihevitra izy ireo fa hamono Funimation sy Crunchyroll ireo studio anime mamakivaky ny fanovana vola amin'ny YouTube. pic.twitter.com/P38KrmKvof
- Rootsofjustice (@rootsofjustice) 18 Aogositra 2020
Araka ny hitanao amin'ireo sioka ireo, ny mpankafy sasany koa:
TENA mino fa hamono ny Funimation sy Crunchyroll i AnimeLog.
Midika koa izany fa serivisy fandefasana anime kely kokoa.
Ary ny sasany mino fa AnimeLog no 'ho avy'.
Na fanoloana tsara an'i KissAnime.
Ity no karazana zavatra tsy maintsy ihomehezako.
Azoko izany, DESPERATE ny mpankafy ny fanatsarana ny streaming anime. Ary mangetaheta serivisy manome azy ireo izay tadiaviny izy ireo.
Fa… AnimeLog tsy ny soavalinao mitafy fiadiana mamirapiratra no atahorako.
AnimeLog dia tsy ampy 'mamono' na inona na inona
AnimeLog dia vokatry ny 30 studio anime miaraka hiara-manjaka. Momba ny fotoana, nolazaiko foana fa ny fiaraha-miasa no fomba tsara indrindra.
Ary maro hafa koa, mikasa ny hanolotra lohateny anime 3000 maimaim-poana amin'ny fantsona YouTube ry zareo.
Mikasa ny hahatanteraka izany izy ireo amin'ny taona 2022. Ka aza mbola mientanentana loatra.
raha tratrany ny tanjony amin'ny 2022:
Hanana atiny bebe kokoa izy ireo noho ny serivisy mivantana misy karama
Tokony ho miharihary amin'ny rehetra izany, izany no antony mahatonga ny olona hiroborobo be mieritreritra fa hialana amin'ny serivisy mivantana misy karama.
Crunchyroll dia manana anaram-boninahitra anime mihoatra ny 1000+ any Etazonia. any amin'ny firenen-kafa dia avy aiza izy na:
Miankina amin'ny firenena na faritra aiza eto amin'ity tontolo ity no resahintsika.
Marina ho an'ny Funimation ihany koa fa ny isa dia ho hafa noho izy ireo Kely kokoa anime amin'ny sehatra misy azy ireo.
Amin'ity scenario ity dia hanjakazaka ny AnimeLog ary hanimba zavatra kely izany.
Fa tsy zava-misy izany
Izay rehetra mieritreritra AnimeLog no mpamonjy lehibe ny anime dia manadino zavatra iray: vola.
Ahoana no hamatsiana ara-bola GRATISA?
Ahoana no haharetan'izany?
Ahoana no hampisy heviny ara-bola?
Ahoana no ahazoan'ny studio anime tombony tombony?
Famonoan-tena tanteraka ny doka YouTube. Adala daholo ireo studio anime nizara an'io pie kely teo anelanelany io.
Raha manapa-kevitra ny hanangom-bola amin'izany fomba izany izy ireo dia ho fantatr'izy ireo tsy ho ela fa asa ratsy izany. Tsy hoe satria tsy mahazo vola ny doka, fa satria tsy mifanaraka amin'ny maodelin'ny orinasan'ny indostria.
Toei Animation sy ny olon-drehetra, na lehibe na kely, dia afaka manome anime “maimaimpoana” araka izay tadiaviny. Azon'izy ireo atao ny mameno ny fantsona YouTube mandra-pipoakany amin'ny anime raha misafidy izy ireo.
Amin'ny faran'ny andro - Money mila atao, raha tsy izany dia TSY misy vintana ny famindrana ireo orinasan-tsivana anime.
Ary ny filalaovana ao anatin'ny sehatry ny rafitry ny YouTube dia tsy ny hevitra hendry indrindra.
Raha niara-nanangana WEBSITE azy manokana ny studio anime ary nandray an'ity fomba ity aho dia ho talanjona kokoa aho. Hanana fifehezana izy ireo ary hanararaotra bebe kokoa amin'izany.
Izany dia fampiasam-bola lavitra kokoa, ary hitako ny zavatra 'YouTube' ataon'izy ireo amin'ny fampiasam-bola fohy.
Tsara kokoa raha nanomana lavitra noho ny tombontsoany izy ireo.
Ny fomba tokana nahavitan'ny AnimeLog ny CR / Funi:
Mitazona fahazoan-dàlana ary mandà tsy hamidy izany.
Manome anime maimaim-poana mandritra ny 5 taona.
Tehirizo ao anatin'ny Japon ny zava-drehetra.
Mialà amin'ny YouTube mankany amin'ny sehatr'izy ireo manokana.
Fa ny zava-misy dia Toei Animation sy ireo studio anime 29 hafa tsy namboarina toa izany.
Tsy manana an'io haavon'ny vola sy fananana io izy ireo hanakanana azy ireo hiala. Ity ny fomba 'Amazon' saingy nesorin'i Amazon izany satria nanana mpampiasa vola izy.
Tsy manana fanohanana toy izany ny studio anime japoney. Ka tsy inona izany fa nofy.
Nofinofy mahafinaritra izany, saingy mila mijanona ireo mpankafy anime ary mieritreritra ny hadalàn'ny zavatra heverin'izy ireo.
Tiako ny hevitry ny AnimeLog fa io no fomba tsy mety raha tsy manana zavatra voatahiry ho any an-dàlana izy ireo. Satria tsy fampiasam-bola maharitra azo ampiharina.
Andao hamarana ity amin'ny andiana bitsika mifandraika:
Nampahafantarina an'i AnimeLog, drafitra fantsona Youtube any Japan, vatsian'ny Etazonia vola, hanolotra anime maimaim-poana.
Misy ny milaza fa ny 'fahafatesan'ny Crunchyroll / Funimation'.
sombin-tantarana tantaram-pitiavana hatsikana fiainana
Tsy izany mihitsy. https://t.co/4OK6EBYeOe
- Canipa | ANDRIAMANITRA IZAHO IANAO NO MATY & # x1f607; & # x1f47f; (@CanipaShow) 17 aogositra 2020
Amin'izao fotoana izao, any Japon ihany no misy azy, miaraka amin'ny zavatra toy ny Future Boy Conan sy andiam-panafody ankizy. Saingy mikasa ny hanampy dikanteny amin'ny famoahana sasany ry zareo.
Fa izao no zavatra: ny vola miditra amin'ny doka Youtube dia tsy hanonitra ny vola very tamin'ny fahazoan-dàlana.
Na ireo fantsona Youtube lehibe indrindra aza dia sahirana amin'ny fanaovana Crunchyroll na Funimation amin'ny alàlan'ny vola miditra amin'ny doka. Ary raha be ny fantsom-baovao manaparitaka an'ity vaovao ity amin'ny pikantsary One Piece, Dragon Ball Super, ary My Hero Academia, tsy misy vintana izany.
Ny loharanom-bola lehibe indrindra ho an'ny anime ankehitriny dia ny fandoavana fahazoan-dàlana avy any ivelany amin'ny serivisy streaming. Ny 'nofinofin'ny studio anime miaraka ary mamoaka maimaim-poana ny anime rehetra azy ireo amin'ny Youtube' dia nofinofy izay mamono farafahakeliny ny vola miditra amin'ny indostria iray manontolo.
Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny anime amerikana dia fehezin'i Sony, AT&T, Netflix. Ny fandavana ny fahazoan-dàlana amin'ireo orinasa ireo ary famoahana azy irery amin'ny alàlan'ny Youtube dia safidy mahatsiravina amin'ny zavatra hafa ankoatry ny ONA na sarimihetsika fohy.
Tsy orinasa kely intsony io. Raha hanomboka ianao, dia mila mameno akany. Toy ny fomba namoahan'ny RetroCrush ny anime malaza. Ary AnimeLog dia mety hanao zavatra mitovy amin'ny kilasika tsy misy fahazoan-dàlana.
Saingy tsy 'handray ny indostria' toa ny fitakiana / fanantenana sasany.
Ny olana amin'ny Piraty anime ary ny fomba ilàna azy hamahana azy
Toei Animation's 'Free' Anime Streaming Service Tsy Hialana amin'ny Piraty
sombin-tantara hatsikana tantaram-pitiavana fiainana